warkii.com » LA YAAB: Ciyaartoy Qabta Cudurka Korona Fayras Iyo Kuwa Aan Qabin Oo Isku Balansaday Ciyaar Saaxiibtinimo
LA YAAB: Ciyaartoy Qabta Cudurka Korona Fayras Iyo Kuwa Aan Qabin Oo Isku Balansaday Ciyaar Saaxiibtinimo
Boliiska gobolka Navarra ee dalka Spain ayaa ogaaday islamarkaana baajiyay ciyaar saaxiibtinimo oo dhexmari laheyd ciyaartoy qaba cudurka Korona Fayras iyo kuwa aan qabin taasoo ku balansaneyd inay ka dhacdo Isniinta magaalada Pamplona.
Nin 23 sanno jir ah ayaa soo agaasimsay kulankaan saaxiibtinimo iyadoo ujeedada ay aheyd inay ka soo qeyb galayaan boqolaal daawadayaal ah, laakiin waxa uu haatan wajahayaa ganaax seddex kun euro ah madaama uu jabiyay sharciga wadanka sida ay boliiska xaqiijiyeen.
Kulanka saaxiibtinimo waxaa loogu magacdaray “Baashaalkii Mendillori” iyadoo xayaysiin loogu sameeyay baraha bulshada, waxaana xayaysiinta lagu sheegay inay tahay kulan lacag loogu uruurinayo dadka uu saameeyay cudurka Korona Fayras.
Dadka xiiseynaya inay ka qeyb qaataan ama daawadaan waxaa loo sheegay inay qaban qaabiyayaasha kala soo xiriiraan Instagram.
Xaafada Mendillori ee magaalada Pamplona waxa ay ka mid tahay meelaha uu sida xun u saameeyay cudurka Korona Fayras, sidaasi darteed inuu shaqsi isku dayo inuu iska horkeeno ciyaartoy qabta cudurka iyo kuwa aan qabin ayaa walwal ku abuurtay maamulka magaalada.
Boliiska ayaa u sheegay dadka inay caqligood adeegsadaan oo ay ka fogaadaan dhacdooyinka ceynkaan oo kale ah iyo isku imaadka balaaran islamarkaana la kala fogaado si loo yareeyo halista cudurka.